LibreOffice: Gadzira Fillable kana Editable PDF | Linux Vakapindwa muropa
El PDF format (Portable Gwaro Fomati) rave rakajairika uye rinoshandiswa kakawanda kugovana magwaro nenzira yakapfava uye inochinja. Parizvino, zvinyorwa zvePDF zvinopa kuita kwakasiyana-siyana kana kushanduka, senge dzakakurumbira dzakapfuma maPDF, mune iyo mifananidzo, mavhidhiyo akadzika, uye zvimwe zvinhu zvinogona kuiswa kuti zvibatanidzane nazvo, izvo zvinoshanda kwazvo kune iyo ndima yekudzidzisa.
Asi mune ino posvo tiri kuzokuratidza diki dzidziso kuti iwe ugone kugadzira yakatarwa mhando ye PDF, inogadziriswa kana kuzadza sokuzivikanwa kwazvinoitwa. Ndokunge, gwaro rePDF rausingakwanise kuverenga chete, asi zvakare kuzadza kana kugadzirisa. Izvi zvinonyanya kushandiswa kushandisa se fomu uye kuti mumwe munhu azadzikise nekunyora munzvimbo dzakasiyana, chimwe chinhu chiri padanho rebazi chinokwezva uye kunyangwe kune kumwe kushandiswa kwebhizinesi kana kwekudzidzisa.
Kuti uite izvi zviitike, iwe unongoda kugovera kwako GNU / Linux kufarira, kana imwe sisitimu yekushandisa mairi inogona kushandiswa LibreOffice uye chirongwa cheMunyori inosanganisirwa mune ino inozivikanwa yemahara suite suite. Kana ari matanho, ingoita zvinotevera:
Kutanga isu tinofanirwa kumira kana kuratidza maviri mamenyu matsva kana tisina iwo atinayo muChiratidziro chinongedzo. Kuti uite izvi, enda kumenu View> Toolbar> Fomu kudzora. Uye zvakare Tarisa> Toolbar> Fomu Dhizaini
Iye zvino mubhawa pazasi iwe uchaona mabhatani maviri ane madonhwe (Ratidza gridhi uye Gadziridza gridhi), vamise iwo.
Zvino, isu tinokwanisa kutanga kunyora gwaro sezvataizowanzoita kuMunyori, chete nematurusi matsva atinawo kuruboshwe kwedu ndipo patinogona kuisa mavara kana mabhaidhi anozadza, matafura, mifananidzo, matipi ekumaka mabhinari sarudzo (Hongu kana Kwete) , mabhatani, nezvimwe.
Kana gwaro raunoda raitwa, tarisa kuti rakasiiwa nemazvo here. Iwe unogona kugadzirisa akawanda ma parameter ezvinhu izvo iwe zvaunogona kuisa, senge saizi yemavara mabhokisi, nezvimwe.
Iye zvino ndizvo zvese, enda kuFaira> Export ku> Export sePDF menyu uye mune iyo huru tebhu inoonekwa, ita shuwa kuti Gadzira fomu rePDF sarudzo rinotarisirwa Gamuchira uende ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice: Gadzira Fillable kana Editable PDF